mail ​ပို့​တဲ့​အ​ခါ ​မေးလ်​ထဲ​က ​စာ​သား​နဲ့​အ​တူ ​ပုံ​တွေ​ပါ​ထည့်​ချင်​ရင် ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
zuezue November 14, 2011 at 7:47 PM
​သား​သား November 21, 2011 at 11:57 PM
​က. .​ခ. .​ဂ. .​ဃ. .​င…​အ .. November 24, 2011 at 1:21 AM
nyinyimyo December 11, 2011 at 12:24 PM
aa January 20, 2012 at 5:45 PM
Sxot! January 21, 2012 at 12:09 PM
zaw January 24, 2012 at 5:04 PM
​အ​ကို​ရေ ​ယ​ယ​လေး​လည်း​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​တယ် ​ကျေး​ဇူး​ပါ​နော်
minkha May 9, 2012 at 9:56 AM
​မ​ရ​ဘူး​အစ်​ကို​ရာ insert ​နေ​ရာ​မှာ invitation ​ဆို​ပြီး​တော.​ပေါ်​နေ​တယ်
yinnyinemoe May 19, 2012 at 4:24 PM
hafiz July 14, 2012 at 5:55 PM
Kyae Sin Oo August 8, 2012 at 9:42 PM
​ကျ​မ​ဆီ​မှာ​လည်း invitation ​ပဲ​ပေါ်​ပါ​တယ်။
ei eikyaw December 28, 2012 at 12:46 PM
setting ​ထဲ​က Lab ​ကို ​ကိုယ်​တိုင်​ကိုယ်​ကျ​သွား​ချင်​ပါ​တယ်။ ​ဘယ်​လို​သွား​ရ​ပါ​သ​လဲ